स्वास्थ्य-यौन — sancharkendra.com
हप्तामा २ देखि ३ पटक यौन सम्पर्क गर्दा महिलालाई हुन्छ यस्ता फाइदाहरु
Posted by Sancharkendra | स्वास्थ्य-यौन
यौनसम्पर्कले मानिसलाई केही समयका लागि रमाइलो अनुभुति दिन्छ तर यसको फाइदाहरु त्योभन्दा पनि बढी रहेको छ । यौनसम्पर्कले पुरुष वा महिला दुवैलाई स्वास्थ्य लाभ दिने काम गर्छ । तर, महिलाले सेक्सबाट धेरै फाइदा लिने एक...बाँकी
एजेन्सी । पुरुषले सेक्सका बारेमा धेरै कुरा गर्छन् भने महिलाले सेक्सको चाहना धेरै राख्छन् । यसको कारण तल दिइएको छः १. यसले शारिरिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छः सेक्सप्रति एडिक्टेड हुनुमा यसको नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ...बाँकी
एजेन्सी । यदि तपार्इँको पार्टनर सेक्स गर्न इच्छा गर्दैन भने अनार ल्याउनुस त्यसको जुस बनाउनुस र पाटनरलाई खुवाउनुस । दिनको १ गिलासका दरले अनारको जुस १५ दिन सम्म खुवाउनु भयो भने पाटनरको यौन व्यवहार तपाईँले...बाँकी
Posted by Sancharkendra | जीवनशैली, स्वास्थ्य-यौन
एजेन्सी । कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी सेक्स गर्लान् त ? यो धेरै चासोको विषय हुनसक्छ । समाजमा आचरण खराब भएका व्यक्तिहरु धेरै सेक्स गर्ने धेरैको सोचाइ हुनसक्छ । तर, हालै प्रकाशित ‘द ब्रिटिश जर्नल...बाँकी
किन लाग्छ हाँसो ? दिमागमा पनि लाग्छ काउकुती !
‘एउटा बूढो मान्छे बच्चैमा मरेछ ।’ यो एउटा सरल वाक्य हो तर यो वाक्य पहिलोचोटि सुन्ने प्रायः सबैलाई हाँसो लाग्छ । हाँसो कुनै मानिसको दैनिक जीवनको एक अभिन्न पाटो हो । हाँसो एक प्रकारको औषधि...बाँकी
महिलाले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेरे के हुन्छ ?
यौन सम्पर्क मानव जीवनको लागि महत्वपूर्ण छ । तर यसलाई सुरक्षित र हानीरहित बनाउनु अझै त्यो भन्दा बढि महत्वपूर्ण छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कले यौनजन्य रोगहरु त निम्त्याउँछ नै तर यौन सम्पर्कको बेलामा अन्य कुराहरुमा...बाँकी
सम्भोगका बेला किन अावाज निकाल्छन महिलाहरू ? पत्ता लाग्यो कारण
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटकमात्र हो भनेका छन्...बाँकी
प्युठान । प्यूठानमा एक जना जनप्रतिनिधिले पत्रकारमाथि धरिलो हतियार प्रहार गरी भौतिक आक्रमण गरेका छन । स्वार्गद्वारी नगरपालिकाका वडा नम्बर ७...
भूमिगत भएको हल्ला चलेपछि विप्लवले मुख खोले, भन्छन्- हामी जनतासँगै छौं, गद्दारहरु भूमिगत भए
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले आफ्नो पार्टी भूमिगत नभइ जनतासँगै रहेको बताएका छन् । क्रान्ति जनताका...
स्पेनको एक पार्कमा पाइप गाड्ने काम भइरहेको थियो । मजदुरहरु जमिन खन्दै थिए । यत्तिकैमा एक मजदुरले जमिन खन्दै गर्दा...
दाङ । प्यूठानका एक जनप्रतिनिधिले चक्कु प्रहारबाट घाइते पत्रकार केन्द्र पिबीको उपचार भइरहेको छ । प्राथमिक उपचार पछि उनलाई वुटवलमा...
आक्रोसित स्थानीयको घेराबन्दीमा परेपछि प्रहरी चौकी छोडेर भाग्यो, यस्तो छ ताजा अपडेट
काठमाडौं । स्थानीयको आक्रोशित भिडको घेराबन्दीमा परेपछि ललितपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय टंगोलका प्रहरीहरु चौकी छोडेर भागेका छन् । घरको कोठाभित्रै घुसी...
स्थानीयले रंगेहात समातेर बुझाएका बलात्कारीलाई प्रहरीले झ्यालबाट भगाएपछि ललितपुरमा तनाव
अंग्रिसा केसी, ललितपुर । ललितपुरमा प्रहरीले नै अपराधीलाई भगाएको भन्दै स्थानीयले प्रहरी चौकी घेराउ गरेका छन् । जिल्लाको महाकाल गाउपालिका...
अन्ततः फुटको संघारमा पुग्यो नेकपा, यस्तो छ माधव नेपाल समुहको भित्री तयारी
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । नेता नेपालले स्थायी समिति सदस्यहरूका लागि चियापान...
पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोरालाई जन्मकैद तोकियो, घटनाले देशभर गलचल, यस्तो छ कसुर
काठमाडौं । बंगलादेशको विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलकी नेतृ बेगम खालिदा जियाका छोरालाई बुधबार जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।...
गृहमन्त्री बादलको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति अमेरिकाको कडा आपत्ति, ओली पनि फायर
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत अमेरिकाले बादलको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे...
काठमाडौं । काठमाडौंको मुलपानीमा सञ्चालन हुँदै आएको जुवा अखडामा प्रहरीले छापामारेको छ । प्रहरीबाट बच्न चार तलामाथिबाट हामफाल्दा दुईजनाको मृत्यु...
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा)का सांसद महेश बस्नेतले दशैंलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने र प्रधानमन्त्री सचिवालय पनि पुनर्गठन हुने...
Copyright © 2016-2018 SancharKendra | Powered By EasySoftnepal